Career blogs-Learning I New Day Jobs
How To Be An Interview King or Queen
Congratulations! You made it to the interview stage! Now what? New Day Jobs recommends these top ...
We only have 24 hours each day, but how use these hours varies greatly, yielding vastly different ...
For maximum career advantage, everyone should strive to adopt an entrepreneurial mindset - no, this mindset ...
How To Quickly Improve English Proficiency
Think, Read, Listen, Speak and Write in English or any other language you are trying to ...
သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်းမှာ အလုပ်တွေဘယ်လို ပြီးအောင်လုပ်မလဲ?
ကျွန်မ တို့တစ်ယောက်ဆီကို တစ်နေ့မှာ အချိန် ၂၄ နာရီ ဆီပဲ ရကျတဲ့အတွက် ရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ လုပ်စရာရှိတဲ့တာဝန်တွေကို ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် အချိန်ကို သေချာစီမံခန့်ခွဲဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်ကို နည်းစနစ်ကျကျစီမံ ခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် အချိန် စီမံခန့်ခွဲ ရာမှာ သတိပြုသင့်တဲ့ အချက် 11 ချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်။1. အရေးကြီးဆုံး တာဝန်ကို အရင်လုပ်ပါ - ဒါကတော့ Time Managment မှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ တစ်နေ့တာ လုပ်စရာတာဝန်တွေထဲက အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တွေကို ၂ခု မှ ၃ခု အထိ သတ်မှတ်ပြီး အရင်ဆုံးဦးစားပေးပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။အကယ်၍ အလုပ်တာဝန် အကုန် မပြီးမြောက်ခဲ့ရင်တောင်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေ ပြီးသွားတဲ့ အတွက်ကျန်တာတွေကို မနက်ဖြန်ကို ရွှေ့၍လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။2. ငြင်းတတ်ပါစေ - ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ အားနာပြီး အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှ အကူအညီတောင်းတာတွေ ကိုလက်ခံမိတတ်ကျပါတယ်၊ သင့်မှာ အလုပ်တွေပိနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ သင့်ရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို သေချာရှင်းပြ၍ ငြင်းပါ၊ အကယ်၍ မငြင်းပဲ လက်ခံမိပါက မလိုအပ်တဲ့ stress တွေရပြီး အလုပ်မပြီးမြောက်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။3. တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၇နာရီ မှ ၈ နာရီ ကြားအိပ်ပါ - အချို့လူတွေကို အိပ်ချိန်ကို လျှော့ပြီး အလုပ်လုပ်တာက အလုပ်တွေကို ပိုမိုပြီးမြောက်စေတယ်လို့ထင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒါက မမှားပေမယ့် လူအများစုဟာ ဇီဝ ဖွဲ့စည်းပုံ အရ တစ်နေ့ကို ၇နာရီ မှ ၈နာရီ အကြား အိပ်စက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန် အလုံအလောက်မရရှိပါက လည်း သင့်ရဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်ပြီး အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းကိုကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။4. လက်ရှိလုပ်နေတဲ့တာဝန်ကို အပြည့်အဝအာရုံစိုက်ပါ - အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ Browser tab တွေအများကြီးဖွင့်ထားတာ၊ ဟိုခုန် ဒီခုန်လုပ်တာကလည်း သင့်ရဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေနိုင်တဲ့ အတွက် တတ်နိုင်သမျှ သင့်လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တာဝန်ကို အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ Browser tab တွေကို မဖွင့်ပဲ အနှောင့်အရှက်ကင်းတဲ့နေရာမျိုး မှာလုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။5. တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်စလုပ်ပါ - အချို့ လူတွေက အလုပ်တာဝန်တစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာ အခါ နောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ကို အချိန်ဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်စလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တာဝန်တစ်ခုကို ထပ်လုပ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တတ်နိုင်သမျှ မြန်မြန် စလုပ်သင့်ပါတယ်။6. အရေးမကြီးတဲ့ အရာတွကို အရမ်းအသေးစိတ်လုပ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ - အသေးစိတ် လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတာကောင်းပေမယ့် သင့်မှာအလုပ်တွေပုံနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကို အသေးစိတ်မလုပ်မိတဲ့ အခါ အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေကို လုပ်ဖို့အတွက် အချိ်န် နည်းသွားနိုင်တဲ့အတွက် ဒီအချက်ကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။7. အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တွေကို အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ - ကျွန်တော်ဆိုရင် Content writer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် စာရေးတာက အဓိကတာဝန် ဖြစ်တဲ့အတွက် စာရေးတာကို အကျင့်တစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါမှ အကျင့်ဖြစ်ပြီး မြန်မြန် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဆိုရင်လည်း သင်အလုပ်မှာ သင့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကို ခွဲထုတ်၍ အကျင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။8. ...
Time management workplace skill
လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ?
[Zawgyi]လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်ပိုင်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများ ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲအလုပ်မှာ ကျွန်ုပ်လိုအပ်မည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု အားလုံးကို စာသင်ကျောင်း သို့မဟုတ် အလုပ်သင် ဆီက ရံဖန်ရံခါမျှသာ စီစဉ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်ခွင် တစ်လျှောက်လုံးမှာ ထူးချွန်ပြီး ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေရန်အလိုငှာ ကျွနု်ပ်တို့သည် အတတ်ပညာပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်များကို သင်ယူပြီး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာအောင် အမြဲပြုလုပ်ရမည်။ သင်၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများထဲမှာ လုပ်ငန်းခွင်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းများကို ဖန်တီးဖို့ “၀ိုင်း” (Wynee) မှ အောက်ပါ အကြံပေးချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အဲဒီအရာတွေက အရည်အချင်း အသစ်များ ပျိုးထောင်ဖို့ရာ သင်ကို ကူညီနိုင်ပြီး အဲဒီအရည်အချင်းများက သင့်လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း၏ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းများဆီ တွန်းပို့နိုင်မည်။&nbsp;&nbsp;&nbsp;၁။ နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခု နေ့တိုင်း ရေးပါတစ်နေ့တာ ပြီးဆုံးတိုင်း ခံစားချက်တွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ ရယ်စရာကောင်းသော အဖြစ်အပျက်တွေ ပါဝင်ပြီး ဘာတွေ သင် ပြီးမြောက်ပြီးပြီလဲ၊ ဘယ်နေရာမှာ သင် ကြိုးစားရုန်းကန်ရသည်ကိုလည်း မှတ်စုတစ်ခု ပြုလုပ်ပါ။၂။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါသင်ယူမှုပိရမစ် သီအိုရီ အရ သင်၏ သင်ယူမှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဆွေးနွေးခြင်းသည် အလွတ်ကျက်မှတ်မှု (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်မျှ သင်၏ မှတ်မိခြင်းကို တိုးလာနိုင်သည်။ သင့်အတွေ့အကြုံများကို သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင် ဒါမှမဟုတ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက်ယောက်နှင့် ဖွင့်ပြောနိုင်သည့် သူကို ရှာပါ။ သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် အကြံပေး ညွှန်ပြသူ တစ်ယောက်ကလည်းပဲ သင်ကိုယ်တိုင် တိုးတက်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်းအသစ်များကို သိရှိဖို့ နည်းလမ်းအကြံပြုချက်များကို ကူညီနိုင်သည်။၃။ ပန်းတိုင်များ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး လမ်းပြမြေပုံတစ်ခု ဖန်တီးပါသင်၏ လုပ်ငန်းသက်တမ်း အတွက် ငါးနှစ် နှင့် ဆယ်နှစ် အစီအစဉ်တစ်ခု ဖန်တီးရေးဆွဲပါ။ ပထမဦးစွာ ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များကို ရွေးခြယ်ပါ။ ပြီးနောက် ထိုပန်းတိုင်ဆီ ရောက်မည့်လမ်းကြောင်းမှာ ဖြည့်လိုက်ပါ။ သတိရနေပါ သင်၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုက သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင်၏လုပ်ငန်းရှင်ကိုပါ ဘယ်လို အကျိုးပြုလိမ့်မလဲဆိုတာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သင်လျှောက်လှမ်းမည့် လမ်းကြောင်းကို စီစဉ်တာတွေ နှင့် သင်၏လုပ်ငန်းခွင်ကို ပုံဖော်ရာတွင် သင်ကို ကူညီဖို့ များပြားသော မှီငြမ်းစရာများကို “၀ိုင်း” (wyneemyanmar) မှာလည်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။[Unicode]လုပျငနျးခှငျမှာ ကိုယျပိုငျသငျယူမှုအခှငျ့အလမျးမြား ဘယျလိုဖနျတီးမလဲအလုပျမှာ ကြှနျုပျလိုအပျမညျ ကွိုတငျပွငျဆငျမှု အားလုံးကို စာသငျကြောငျး သို့မဟုတျ အလုပျသငျ ဆီက ရံဖနျရံခါမြှသာ စီစဉျပေးလရှေိ့သညျ။ ကြှနျုပျတို့၏ အလုပျခှငျ တဈလြှောကျလုံးမှာ ထူးခြှနျပွီး ဆကျလကျယှဉျပွိုငျနရေနျအလိုငှာ ကြှနျုပျတို့သညျ အတတျပညာပိုငျး ကြှမျးကငျြမှု အသဈမြားကို သငျယူပွီး တိုးတကျကောငျးမှနျလာအောငျ အမွဲပွုလုပျရမညျ။ သငျ၏ နစေ့ဉျလုပျငနျးမြားထဲမှာ လုပျငနျးခှငျသငျယူမှုအခှငျ့အလမျးမြားကို ဖနျတီးဖို့ “ဝိုငျး” (Wynee) မှ အောကျပါ အကွံပေးခကျြမြားကို ဖျောပွထားပါသညျ။ အဲဒီအရာတှကေ အရညျအခငျြး အသဈမြား ပြိုးထောငျဖို့ရာ သငျကို ကူညီနိုငျပွီး အဲဒီအရညျအခငျြးမြားက သငျ့လုပျငနျးအခှငျ့အလမျး၏ နောကျထပျ ခွလှေမျးမြားဆီ တှနျးပို့နိုငျမညျ။&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;၁။ နစေ့ဉျမှတျတမျးတဈခု နတေို့ငျး ရေးပါတဈနတေ့ာ ပွီးဆုံးတိုငျး ခံစားခကျြတှေ၊ ပြျောရှငျမှုတှေ၊ စိုးရိမျပူပနျမှုတှေ၊ ရယျစရာကောငျးသော အဖွဈအပကျြတှေ ပါဝငျပွီး ဘာတှေ သငျ ပွီးမွောကျပွီးပွီလဲ၊ ဘယျနရောမှာ သငျ ကွိုးစားရုနျးကနျရသညျကိုလညျး မှတျစုတဈခု ပွုလုပျပါ။၂။ တဈစုံတဈယောကျနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေးပါသငျယူမှုပိရမဈ သီအိုရီ အရ သငျ၏ သငျယူမှုမြားနှငျ့ စိနျချေါမှုမြားကို ဆှေးနှေးခွငျးသညျ အလှတျကကျြမှတျမှု (၇၀) ရာခိုငျနှုနျးကြျောမြှ သငျ၏ မှတျမိခွငျးကို တိုးလာနိုငျသညျ။ သငျ့အတှအေ့ကွုံမြားကို သူငယျခငျြး၊ မိသားစုဝငျ ဒါမှမဟုတျ လုပျဖျောကိုငျဖကျ တဈယောကျယောကျနှငျ့ ဖှငျ့ပွောနိုငျသညျ့ သူကို ရှာပါ။ သူငယျခငျြး သို့မဟုတျ အကွံပေး ညှနျပွသူ တဈယောကျကလညျးပဲ သငျကိုယျတိုငျ တိုးတကျရနျနှငျ့ ဖွရှေငျးနညျးလမျးအသဈမြားကို သိရှိဖို့ နညျးလမျးအကွံပွုခကျြမြားကို ကူညီနိုငျသညျ။၃။ ပနျးတိုငျမြား ခှဲခွားသတျမှတျပွီး လမျးပွမွပေုံတဈခု ဖနျတီးပါသငျ၏ လုပျငနျးသကျတမျး အတှကျ ငါးနှဈ နှငျ့ ဆယျနှဈ အစီအစဉျတဈခု ဖနျတီးရေးဆှဲပါ။ ပထမဦးစှာ ရညျရှယျခကျြပနျးတိုငျမြားကို ရှေးခွယျပါ။ ပွီးနောကျ ထိုပနျးတိုငျဆီ ရောကျမညျ့လမျးကွောငျးမှာ ဖွညျ့လိုကျပါ။ သတိရနပေါ သငျ၏ ပညာရပျဆိုငျရာ တိုးတကျမှုက သငျကိုယျတိုငျရော သငျ၏လုပျငနျးရှငျကိုပါ ဘယျလို အကြိုးပွုလိမျ့မလဲဆိုတာ ထညျ့သှငျးစဉျးစားပါ။ သငျလြှောကျလှမျးမညျ့ လမျးကွောငျးကို စီစဉျတာတှေ နှငျ့ သငျ၏လုပျငနျးခှငျကို ပုံဖျောရာတှငျ သငျကို ကူညီဖို့ မြားပွားသော မှီငွမျးစရာမြားကို “ဝိုငျး” (wyneemyanmar) မှာလညျး ဖတျရှုနိုငျပါတယျ။---- The article ...
(English version below)[Zawgyi]မိမိကိုယ်ကိုယ်သိဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်နည်းလမ်းများလူတချို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်၊ ဘာတွေကို သူတို့တွေ အောင်မြင်အောင် လုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြည့်ပြည့်၀၀မသိဘဲ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းသွားကြပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုယ် သိတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်စီမံခန့်ခွဲဖို့နဲ့ လူအများနဲ့ အဆင်ပြေပြေဆက်သွယ် နိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ “ခံစားချက်တစ်ခုကို ဖြစ်ပျက်တဲ့အတိုင်း သိမြင်တာ၊ တစ်နည်းပြောရရင် မိမိကိုယ်ကိုယ် သိတာက စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအသိဥာဏ်အတွက် အဓိကအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်” လို့&nbsp;Emotional Intelligence (စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအသိဥာဏ်)&nbsp;ထဲမှာ Daniel Goleman က ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်၊ အကျင့်တွေ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အပြုအမူတွေနဲ့ ကိုယ် တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ ပြည့်ပြည့်၀၀သိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကို ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကို သိရမယ်။ လူတော်တော် များများက ကိုယ့်အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ အမှန်တကယ်ကတော့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခက်ခဲတဲ့အမှန်တရားတွေကို ရိုးရိုးသားသား သိရှိပြီး လုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်ပါ တယ်။ မိမိကိုယ်ကိုယ်သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို Wynee က အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။စာရင်းပြုစုပါအားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေအပါအ၀င် ကိုယ့်အကြောင်းကို ဖော်ညွှန်းပြသနိုင်တဲ့စကားလုံး တွေ၊ စကားစုတွေကို စာရင်းပြုစုကြည့်ပါ။ မြန်မြန်လုပ်ကြည့်ပြီး ဘေးမှာချထားလိုက်ပါ။ ရက်အနည်း ငယ်ကြာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီစာရင်းထဲက ကိုယ့်ရဲ့စရိုက်တွေကို ဖျက်ချင်တာဖျက်၊ ထပ်ထည့်ချင်တာ ထပ်ထည့်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ပုံမှန်အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ ဥပမာ-မိဘ၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် (ကိုယ်နဲ့ သက်တူရွယ်တူတွေနဲ့ အထက်လူကြီးနှစ်ယောက်လုံးဆိုရင် ကောင်းပါတယ်) တွေထဲက သုံးယောက်စီနဲ့ အနည်းဆုံးလူ ၉ ယောက် ကိုလည်း အလားတူလုပ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ ဘယ် အရာတွေက ထပ်နေလဲ၊ ဘယ်အရာတွေက အံ့သြစရာကောင်းနေလဲဆိုတာ သိရအောင် သူတို့ရဲ့ စာရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။စာရင်းနှစ်ခုကို ပေါင်းပါ(က) ကိုယ့်စာရင်းထဲမှာပါနေပြီး တခြားသူတွေဖော်ပြထားတဲ့ အလားတူတဲ့ စရိုက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီး (ခ) ကိုယ့်စာရင်းထဲမှာမပါတဲ့ တခြားသူတွေဖော်ပြထားတဲ့စရိုက်တွေပါ။ ပထမတစ်ခုက ကိုယ့်အကြောင်းကို သိနေတယ်ဆိုတာရဲ့ အတည်ပြုချက်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုမှာတော့ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ် မသိတဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် လက်မခံချင်တဲ့ေ၀၀ါးနေတဲ့အချက်တွေပါဝင်နိုင် ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူပေါ် တခြားသူတွေရှုမြင်ပုံကို အခြေခံထားတဲ့အတွက် အဲဒီရှုမြင်ချက်တွေအားလုံးကို&nbsp;&nbsp;ဆီလျော်မှုရှိတယ်လို့ လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။သုံးသပ်ပါ၊ ရေးပါတစ်ပတ်တာအတွင်းက ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေမှာ ကိုယ်ပြုမူခဲ့တဲ့၊ တုံ့ပြန်ခဲ့တဲ့ အရာတွေအပေါ် သုံးသပ်နိုင်ဖို့ စနေ၊တနင်္ဂနွေထဲက တစ်ရက်ရက်မှာ ကိုယ့်အတွက်&nbsp;ကိုယ်ပိုင်အချိန်ရှာပါ။ ဥပမာ-အလုပ်မှာ ပြဿနာဖြစ်တဲ့ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်ရတဲ့နေ့တွေမှာ ဒါကို အဲဒီနေ့ရဲ့ အဆုံးမှာ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒါက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ မှတ်မိနေအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ အဲဒီထဲမှာပါတဲ့ တခြားသူတွေနဲ့ သူတို့တွေရဲ့ပြုမူပုံတွေကို အာရုံမစိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကို ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို စဉ်းစားပါ။ စာရင်းနှစ်ခုပေါ်မှာ ပြန်ပြီးသုံးသပ်ပါ။ စာရင်း (က) မှာ ပြုပြင်ဖို့လိုတာတွေရှိမရှိကြည့်ပါ။ စာရင်း(က)မှာ ကိုယ့်ရဲ့စရိုက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတွေ ထပ်ထည့်ပြီး နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးပါ။သတိရှိမှုကို အလေ့အကျင့်လုပ်ပါဒါက အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားလည်မှုနဲ့ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့အတွက် သက်ရောက်မှုအရှိဆုံးခြေလှမ်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေ၊ တုံ့ပြန်ချက်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူ (မျက်နှာထား၊ အသံ) တွေပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုမရှိခင် သူတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်း သတိရှိတာက ရေရှည်လုပ်ရမယ့် အရာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်း၊ ရေချိုးရင်း၊ စားရင်း စတဲ့နိစ္စဓူဝတာဝန်တွေလုပ်ဆောင်ရင်း ရိုးရိုးလေး သတိထားပြီးအသက်ရှူခြင်း (သတိကပ်ပြီး တရားထိုင်ခြင်း)ကို စတင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင် သတိရှိမှုကို တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်က ပုံမှန်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့သတိရှိမှုက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကို တစ်သမတည်းသိရှိသွားစေပြီး ကိုယ့်အကြောင်းကို နားလည်မှုကလည်း နက်နဲလာမှာပါ။ တစ်နေ့ ငါးမိနစ်စသဖြင့် နည်းနည်းချင်း စလုပ်ကြည့်ပါ။ သက်သောင့်သက်သာပိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ “ထိုင်”တဲ့အချိန်ကို တိုးကြည့်ပါ။ အရာရာတိုင်းကို သတိရှိရှိလုပ်ဆောင်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိမှုက အလေ့အကျင့်ကနေ ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။သတိကပ်ပြီး တရားထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ၊ ဆရာတွေရှိကြပေမယ့် ကိုယ်တိုင်က အမြဲတမ်း ရိုးရိုးလေးသတိထားပြီး စူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ အသက်ရှူမှုကို အလေ့အကျင့်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါ တယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ “တိုးတက်လာတဲ့ခံစားချက်ကို အမှန်တကယ် သိရှိပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နက်နက်နဲနဲ နားလည်လာပြီး အသိအမှတ်ပြုလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်နားလည်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရရော၊ လုပ်ငန်းသဘောအရပါ တိုးတက်လာဖို့အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေက ကိုယ့်အကြောင်း၊ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပိုပြီးသိရှိလာဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ခင်စန္ဒီလွင်သည် အာရှ၊ အာဖရိကနဲ့ ...